आईफोन s एसमा ब्याट्रीलाई के हुन्छ? | आईफोन समाचार
आईफोन s एसमा ब्याट्रीलाई के हुन्छ?
हामी ब्याट्रीको सवालमा विवादमा फसेको छ। तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ, आईफोन and र आईफोन s हरूसँग सम्बन्धित धेरै उपकरणहरू धेरै गम्भीर ब्याट्री समस्याबाट ग्रस्त छन्। यी धेरै समस्याहरू एप्पलले यी उपकरणहरूका लागि प्रतिस्थापन कार्यक्रम मार्फत समाधान गरेका छन्। जहाँसम्म, हामी अझै पनि प्रयोगकर्ताहरू भेट्टाउछौं जसले मलाई जस्तै, ब्याट्री उपभोग दुबै आईओएस १०.२ र आईओएस १०..6 बीटा दुबैमा अपर्याप्त पाउँदछन्। र यो यो हो कि खपत र स्वायत्तता हास्यास्पद हुँदै गइरहेको छ, त्यसैले हामी आफैलाई सोध्छौं, एप्पलबाट आईफोन s एस ब्याट्री भद्रजनहरू के हुँदैछ? मुख्य मुद्दाहरूमा एक नजर राख्दछौं।
तपाइँलाई एक विचार दिन, मसँग हाल आईफोन 69 एसमा%%% ब्याट्री पावर छ जुन gr घण्टा र १२ मिनेट अघि पावर ग्रिडबाट काटिएको थियो। यद्यपि यो3घण्टा र of मिनेट प्रयोग को लागी चिन्ह लगाउँछ। अर्कोतर्फ, हामी खपत तथ्या .्कमा फर्कन्छौं र हामी देख्छौं कि व्हाट्सएपले पृष्ठभूमिमा9घण्टा उपभोग गर्यो, जसरी स्पोटिफाइले गर्यो। यद्यपि मेरो उपकरणमा, धेरै अरूहरू जस्तै पृष्ठभूमि गतिविधि यस कारणले अक्षम गरिएको छ।
यो स्पष्ट रूपमा काम गर्दैन, तर यो एक मात्र गम्भीर समस्या जस्तो देखिदैन। जब हामी देख्छौं कि ब्याट्री दिनको मध्य दिनमा पनि आइपुगेको छैन, हामी "ब्याट्री सेभिंग मोड" समात्छौं, यस्तो मोड जुन केवल केहि गर्दैन जस्तो देखिन्छ, तर ब्याट्री अझ छिटो खस्ने देखिन्छ। एक आईफोन s एसमा, यसले सबै गर्दछ आइकनको रंग परिवर्तन गर्नु।
समस्या के हो? मसँग धेरै ब्याट्री बचत विधिहरू छन्, सबै मेरो उपकरणको कन्फिगरेसनमा सँगै बन्डल छन् जुन आईओएस १०..10.3 बीटा १ मा चल्दछ। तथापि, समान प्रभाव आईओएस १०.२ आधिकारिक संस्करणमा देखाईएको छ। हालै, एप्पलले स्वीकार गर्यो कि आईफोन battery एसको ब्याट्री हालमा समस्या छ, तथापि, यस्तो लाग्छ कि उनीहरूले यसलाई हल गर्न थोरै गरे वा केही गरेनन्।
तपाइँको अनुभवको बारेमा हामीलाई भन्नुहोस्, आईफोन s एस ब्याट्री कति लामो हुन्छ? हामी अधिक वा कम जान्न चाहन्छौं यदि बहुसंख्यक प्रयोगकर्ताहरू समान समस्याबाट ग्रस्त छन् भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » आईफोन s एसमा ब्याट्रीलाई के हुन्छ?
यो उस्तै उस्तै हुन्छ। हिजो मैले केहि मिनेटमा मेरो ब्याट्री नाली देखेको; तथ्य यो हो कि, म व्हाट्सएपमा फोटोहरू पठाउँदै थिएँ र ती धेरै थिए (म यसलाई स्वीकार्छु) तर, यो अतिशयोक्तिपूर्ण भयो कि suddenly%% बाट अचानक 59 55 %मा झर्नेछ र अलि अलि गर्दै यो 41१% सम्म पुग्नेछ। मलाई थाहा छैन के भइरहेको छ तर म आशा गर्दछु कि उनीहरूले यसको द्रुत समाधान भेट्टाउने छन् किनकि यो हताश छ।
एड्रियन ड्यूक भन्यो
ठीक त्यहि कुरा तपाईलाई हुन्छ। मैले १२ घण्टा पछि पूर्ण चार्जबाट इन्टरनेट प्रयोग नगरी र कलमा मध्यम प्रयोग सहित रिचार्ज गर्नुपर्नेछ। एन्ड्रोइड प्रणालीको साथ मोबाइल फोनका अन्य ब्रान्डका साथ मलाई यो समस्या भएको छैन। एप्पल एक जरूरी समाधान दिनु पर्छ।
एड्रियन ड्यूकलाई जवाफ दिनुहोस्
कन्सेप्सीन गोन्जालेज भन्यो
मेरो 6s मा उही कुरा हुन्छ; ब्याट्री चरम उपयोग बिना अधिकतम hours घण्टा चल्दछ। मैले Technical पटक प्राविधिक सेवामा सम्पर्क गरेको छु र उनीहरूले परीक्षण गर्छन् र उनीहरूले मलाई भन्छ कि ब्याट्री स्वस्थ छ। यति धेरै कि मैले अर्को मोबाइल किनेको छु, जे होस, एप्पलबाट छैन कि म अब हेर्न चाहन्न।
यो स्पष्ट छ कि समस्या सफ्टवेयरसँग छ किनकि मसँग न्यूनतम अन्तर्गत सबै छ, स्वत: अपडेटहरू बिना वा पृष्ठभूमिमा, ब्याट्री बचतको साथ, अनुप्रयोग संचारहरू बिना ...
के एक रसिद हैन कि म € 700 लागत एक फोन को यो समस्या छ, र म डराउँछु कि कम्पनीले धिक्कार छैन, महत्वपूर्ण कुरा चलानी छ, तर मेरो अंश को लागी, उनीहरु लाई खरीद गर्न समाप्त भयो।
Concepción González लाई जवाफ दिनुहोस्
जेभियर कोनेजोस भलेरो भन्यो
मैले १ days दिन अघि आईफोन boughts किनेको थियो, र ब्याट्रीले मलाई धेरै समस्याहरू दिइरहेको छ।
टिप्पणी गर्नुहोस् कि उनीहरूले जब मसँग यो ल्याए, तिनीहरूले मलाई अर्को आईफोन ss4दिनको लागि दिए, र साथै
यसले मलाई धेरै ब्याट्री समस्याहरू दियो।
मलाई थाहा छैन एप्पलले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउनेछ जब म मर्मतको लागि लिन्छु।
Javier Conejos Valero लाई जवाफ दिनुहोस्
डेनियल मोरल भन्यो
यो ठीक त्यस्तै हुन्छ, मेरो आईफोन s एस एकदम चाँडो हुन्छ, तर भलाइ धन्यवाद जुन यसले "चाँडो" चल्दछ जहाँसम्म यो जान सक्दछ। अझै, यो सँधै राम्रो छ बाह्य ब्याट्री हुनु।
डेनियल मोरललाई जवाफ दिनुहोस्
उस्तै कुरा मलाई पनि छिटो हुन्छ, मसँग G एस G जीबी छ, ब्याट्री अप टु डेट छैन! तपाईले यसलाई १००% मा देख्नुहुनेछ किनकि यो लामो समय सम्म रहन्छ र २०% वा सो भन्दा पनि लामो समय सम्म यसले बन्द हुन्छ! तपाईं यसलाई फेरि खोल्नुहोस् र यसमा ब्याट्री छ, ब्याट्री पिल्मेट हुन्छ जब तपाईं केहि गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले धेरैमा के खर्च गर्नुहुन्छ भनेर हेरेर, म यो ट्वीटर हो र यसलाई जाँच गर्दैछु भनेर म तपाईलाई भन्न सक्छु कि यो लगभग १% खपत भएको मिनेटमा जान्छ। आशा छ कि उनीहरूले यो नयाँ छिटै नै ठीक गरीदिनेछन्
AJFdz लाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईफोन plus प्लस, s एस प्लस, र plus प्लस (वर्तमान) थियो, र मलाई ती समस्याहरू भएन जुन तपाईंले कुनै पनि सँग उल्लेख गर्नुभयो ...
के तपाईले ब्याकअप बिना सफा प्रतिलिपि पुन: भण्डारण गर्ने प्रयास गर्नुभयो?
हाल plus प्लस लगभग १ 7-१ hours घण्टा प्रयोगको हुन्छ र सामान्यतया अझै १ 13% बाँकी छ।
किनकि म आईओएस १०.२ मा गएँ, मेरो ब्याट्री मेरो आईफोन s एस प्लसमा बाहिर जान्छ
प्लस संस्करणको ब्याट्रीसँग अधिक स्वायत्तता छ, मेरो आईफोन Plus प्लसको or वा सो भन्दा बढी दिनसम्म रहन्छ, मेरो आईफोन s एसको एक दिनभन्दा बढी हुँदैन।
अमांडालाई जवाफ दिनुहोस्
शाउल कोर्टेस भन्यो
म अघिल्ला उत्तरहरूमा सामेल हुँ। मँ देख्दिन कि एप्पलले हामीलाई हेरचाह गर्छ कि यी उपकरणहरू भएकाहरूलाई के हुन्छ।
सेल कर्टहरूलाई जवाफ दिनुहोस्
जब ब्याट्री त्यो गतिमा खपत हुन्छ, यो प्राय: किनभने त्यहाँ अनुप्रयोग वा केहि छ जुन CPU लाई उच्च खपतको साथ बाध्य पार्दैछ (उदाहरणका लागि, the०% CPU लगातार प्रयोग भइरहेको छ)। धेरै पटक यो पछिल्लो अपडेटको साथ अघिल्लो अनुप्रयोग कन्फिगरेसन फाइलहरूको साथ ओटा अपडेटहरू पछि हुन्छ। यद्यपि यो जटिल देखिन्छ, समाधान आईओएस १०.२ वा १०.२.१ को सफाई स्थापना गर्न बैकअपबाट पुनःस्थापना नगरी हो।
मेरो plus प्लस सामान्यतया १-7-१-13 घण्टा प्रयोगको लागि हुन्छ।
ss प्लस करीव १० घण्टा उसले लिन्छ
र plus प्लस लगभग १२ घण्टा।
माई गणना भन्यो
Iñaki र म त्यो कसरी गर्न सक्छु ??। म धेरै विशेषज्ञ होइन
माई गणनालाई जवाफ दिनुहोस्
गूगल कसरी ios संस्करण को जगेडा गर्न को लागी बैकअप को उपयोग नगरी
मलाई मेरो आईफोन S एस GB6जीबी ब्याट्रीको समस्या थियो र म एप्पलको प्रतिस्थापन ब्याट्रीहरूमा गएँ। तिनीहरूले यसलाई परिवर्तन गरेदेखि यो सामान्य प्रयोगको साथ डेढ दिनको लागि उत्तम रूपमा काम गर्दछ। एक किस्सेको रूपमा, मैले मेरो मोबाइलमा फेसबुकको प्रयोग गर्न रोक्ें, जब म यसलाई हेर्न चाहान्छु, मैले फेरि पासवर्ड राख्छु। मलाई आशा छ कि समस्याहरू छिट्टै नै हल हुनेछ।
Zoigber लाई जवाफ दिनुहोस्
IV  N (@ ivancg95) भन्यो
म सँधै चीना खेल्छु र यो यस पटक जस्तो देखिदैन। यो सत्य हो कि म आईफोनको अधिक प्रयोग गर्दिन, तर ब्याट्री २ दिन लामो हुन्छ। के हुन्छ भनेर हेर्न म ब्याट्री हेर्न गइरहेको छु।
IV ly N (@ ivancg95) लाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग664 जीबी आईफोन S एस पनि छ, र म ब्याट्री प्रतिस्थापन कार्यक्रममा प्रवेश गर्छु। तिनीहरूले हिजो मलाई दिए, मैले मेरो ब्याकअप पुनर्स्थापना गरें ... र म देख्छु यो ब्याट्री खपतको समान समस्याको साथ जारी छ।
म स्थापना को स्क्र्याच बाट गर्न को लागी कोशिश गर्नेछ, ब्याकअप को बहाली बिना।
AlexVanHalen लाई जवाफ दिनुहोस्
Natxo Hdez रोजेली भन्यो
मेरो एप्पलले मेरो s एसको ब्याट्री परिवर्तन गर्यो र अब, अन्त्यमा, यो चल्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। वैसे, तिनीहरूले मलाई १ 6०० बाट दिएका छन्, १ 1800१1715 बाट होइन किनकि यो मूल हो।
Natxo Hdez रोजेलीलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो ब्याट्री को प्रभाव धेरै राम्रो छ; यो सत्य हो कि म गहन प्रयोगका केही अनुप्रयोगहरू (खेलहरू र अन्यहरू) प्रयोग गर्दछु, तर काममा म applications जी / G जी जडानको साथ धेरै अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्दछु (कभरेज भयानक हो) र यसले-3 घण्टा पाली लिन सक्दछ। मसँग S एस छ र मैले ब्याट्री प्रतिस्थापन कार्यक्रममा विचार गरेको छैन किनकि मलाई कुनै समस्या छैन।
Sonlera लाई जवाफ दिनुहोस्
"ब्याट्री सेभर" सक्रिय भएपछि पनि मसँग प्रत्येक दिन यो समस्या आएको छ। मसंग व्हाट्सएप छैन र म धेरै मेमेज प्रयोग गर्दैन।
स्टीवनलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो आईफोन On मा, कम ब्याट्री जीवनको थपमा, मैले अर्को केही हदसम्म असुविधाजनक त्रुटि पनि याद गरेको छु जुन यद्यपि मैले यो बुझ्दिन, म निश्चित छु कि यो सफ्टवेयर असफलता हो। म तपाईंलाई विस्तार गर्दछु:
यदि ब्याट्री %०% भन्दा कम छ र म आईफोन बन्द गर्दछ (उदाहरणका लागि, रातमा), जब म फेरि खुला गर्दछु यो बन्द हुन्छ यदि योसँग ब्याट्री छैन भने। यसलाई चालु गर्न कुनै तरिका छैन।
यसलाई प्रयोग गर्नको लागि, तपाईंले यसलाई चार्जरमा जडान गरेर चालमा पार्नुपर्नेछ। एक पटक खोल्दा, ब्याट्रीले मैले रंग गरेको समान% देखाउँदछ, र म यसलाई सामान्य रूपमा प्रयोग गर्न यसलाई अनप्लग गर्न सक्छु।
धेरै समस्या, सही?
Alrod लाई जवाफ दिनुहोस्
मार्कोस कुएस्टा (@marcueza) भन्यो
म आईफोन s एस plus प्लस have with आईओएस .6 ..64. and र सिद्धको साथ छ, मेरी श्रीमतीको आईफोन 9.3.3 १ and छ र आईओएस6..16..9.3.3 को उनीसँग कहिल्यै समस्या थिएन, उनले आईओएस १०.२ मा जान निर्णय गरे र ब्याट्री समस्या सुरु भयो। यो गन्ध आउँछ जस्तै अपरेटिंग प्रणाली अपराधी हो
मार्कोस कुएस्टालाई जवाफ दिनुहोस् (@marcueza)
ऊर्जा बचत चीज पूर्ण रूपमा सहमत भयो, यसले केवल र battery्ग ब्याट्री प्रतिमा परिवर्तन गर्नका लागि कार्य गर्दछ।
Felix55faq लाई जवाफ दिनुहोस्
समान कुरा मलाई ब्याट्रीको साथ हुन्छ, म एक दिनमा प्राप्त गर्दिन। S एस i6आईओएस १०.२
Tormi लाई जवाफ दिनुहोस्
म मात्र एक जना राम्रो हुनुपर्छ। मैले यो समस्यालाई वेवास्ता गर्दै सेकेन्ड-6 64 जीबी आईफोन S एस खरीद गरें, र मैले गरेको पहिलो कुरा भनेको ब्याट्री क्यालिब्रेट गर्नु हो। पहिलो प्रयोग, मैले यसलाई बिहान १०:०० मा हटाएँ र यो दिनको १:०० सम्म चले। आज, यसलाई अधिक गहन प्रयोग दिदैँ, मैले यसलाई १०:०० बजे तिर हटायो र अहिले यो लगभग% 10% छ
कोका-कोलोलाई जवाफ दिनुहोस्
यही कुरा मेरो आईफोन happens मा हुन्छ: यदि min० मिनेटमा%%% पुग्छ भने, योसँग २०% भन्दा कम हुनेछ !! र व्हाट्सएप प्रयोग नगरी, वा स्पोटिफाइ वा कुनै अन्य प्रोग्राम ... समस्याहरू आइओएस १०.१ स्थापना गर्दा देखा पर्‍यो जब यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ
डेभिड विलास्कुसा रुइज भन्यो
पूर्ण रूपमा सहमत छ, आईओएस १० बाट पछि मैले ब्याट्री जीवनमा एक ड्रप देखेको छु। जब म 10x का साथ एप्पल गएँ, म ब्याट्रीको गर्व गर्थें र धेरै खुसी थिएँ, अब अप्ठ्यारोमा परेको छु।
डेभिड विलास्कुसा रुईजलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो श्रीमती र म सँग आईफोन6छ, ब्याट्री आधा दिनमा चलेको छैन र यो %०% ब्याट्रीको साथ बन्द हुन्छ, वा केही चरणमा to० देखि १०% बाट खस्छ। तपाईंले यसलाई प्लग इन गर्नुभयो पछि यो %०% ब्याट्रीको साथ बन्द गरिएको छ र यो खोल्ने बित्तिकै उस्तै प्रतिशत छ। : /
मेरो विशेष केसमा म always एस मा पहिले नै आईओएस problems वा १० मा ब्याट्रीको समस्या हुँदाहुन्छ। म कहिले प्रयोगको दिनमा पुगेको थिइनँ र यो स्थिर हो जुन उपकरण १ 6% बन्द भयो। गत हप्ता मैले मेरो ब्याट्रीलाई प्रतिस्थापन गर्‍यो किनकि मेरो मोबाइल प्रतिस्थापन कार्यक्रममा थियो र मैले स्वीकार गर्नै पर्दछ कि यी दिनहरूमा स्थिति पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ।
हाल म २ 23 घण्टा 384मिनेट र hours घण्टा use मिनेट प्रयोगको लागि निष्क्रिय भएको छु र ब्याट्री% 7% मा छ। मलाई थाहा छैन यो राम्रो छ वा खराब हो तर मसँग यो प्रदर्शन कहिले भएको छैन। म जे भए पनि यसको परीक्षण जारी राख्ने छु।
मसँग धेरै आईफोन s एस छन् र केवल एक जसले मलाई ब्याट्री असफलता दिएको थियो त्यो सामसु ch चिपको साथ थियो, टीएमएससी चिपको साथमा मलाई कुनै समस्या भएन। मैले प्रयोग गरेको एकसँग अहिले TMSC चिप छ, उनिले मलाई डिसेम्बरमा दिए किनकि यससँग स्यामसंग चिप थियो र मैले वारेन्टीको प्रयोग गरेर परिवर्तन गरें किनकि ब्याट्रीले राम्रो प्रदर्शन गरेको छैन।
Pocho1c लाई जवाफ दिनुहोस्
आरोन ओन्टीभेरोस भन्यो
आईफोन s एसको साथ मेरो अनुभवमा मैले टीएमएससी चिपसँग धेरै राम्रोसँग काम गरिरहेको छु र सामसु ch चिपको साथ केवल एक, पछिल्लो ब्याट्रीको खराब प्रदर्शनको कारण मैले वारेन्टी लिनुपर्‍यो, भाग्यवस तिनीहरू यसलाई अर्कोसँग बदले TMSC चिप जुन म हाल प्रयोग गर्दैछु र यो उत्कृष्ट कार्य गर्दछ। हुनसक्छ त्यो समस्या हो।
एरन ओन्टीभेरोसलाई जवाफ दिनुहोस्
आईफोन s एसको ब्याट्रीलाई के हुन्छ? केहि छैन।
अह अहँ, तपाईको मतलब त्यो हो कि प्रत्येक दुई x तीन ios अपडेट गर्दछ; ठिक छ, हो, पक्कै पनि उनीहरूसँग केहि हुनेछ, सबै कुरा भन्नु हुँदैन ...
आईफोन ss मौलिक आईओएसको साथ मानक र शून्य ब्याट्री समस्याहरूको रूपमा, वास्तवमा शून्य समस्याहरू!
मेरो केसमा S एस २० वा %०% ब्याट्रीमा सकृय भएको छ र सकृय छैन। यो या त ब्याट्री परिवर्तन कार्यक्रममा जान सकेन। ब्याट्री क्यालिब्रेट गरेर फिक्स गरियो
फैसला आईओएस १० अपराधी हो, मलाई कुनै श .्का छैन। आईओएस battery को ब्याट्री समस्याको साथ मैले कुनै टिप्पणी देखेको छैन।
यहाँ पनि। आईफोन plus प्लस जुन% 6% पुग्छ र बन्द गर्दछ म त्यसलाई प्लग इन गर्छु र यो समय 35० मा फिर्ता हुन्छ।
मैले केहि बुझिन!
Albe लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो केसमा, मसँग ब्याट्री १ 15% देखि २%% ब्याट्री संग हुन्छ र अचानक यो बन्द हुन्छ र चार्जर प्लग गर्ने आइकन देखा पर्छ।
यो गरेर, म फोन खोल्न सक्छु र यो ब्याट्रीको यो अन्तिम% संग देखा पर्दछ।
म मेरो आईफोन on मा १००% ब्याट्री प्रयोग गर्न सक्दिन
एलाडियसलाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईफोन s एस प्लस छ र मसँग सामान्य s एस जस्तो ब्याट्री समस्याहरू छन्।
मैले एप्पललाई सम्पर्क गरेको छु र समाधानको रूपमा, उनीहरूले मलाई भन्छ कि उनीहरूले ब्याट्री परिवर्तन गर्छन् र मर्मतको लागि भुक्तान गर्दछु।
मलाई यो राम्रो लाग्दैन कि 6s प्लससँग समान समस्याको साथ s हरू, मैले मर्मतको लागि भुक्तान गर्नुपर्दछ र not एसले गर्दैन।
धेरै नराम्रो स्याउ
आईफोन s एस प्लस र ब्याट्रीले मलाई दिनभर चल्छ र राती until सम्म चल्छ .. बिहान6देखि रात 8 सम्म १-8-२०% सँग .. र प्रयोग मध्यम छैन तर यो धेरै आक्रोशित छैन .. भन्नुहोस् सामान्य प्रयोग, ईमेल, कल, डब्लूएस, डब्लूएस कल कल, फोटो, भिडियो रेकर्डि,, स्न्याप, इन्स्टाग्राम र केहि बढि चीज ..
पापो लाई जवाफ दिनुहोस्
तीन महिनाको लागि १G जीबी आईफोन threes प्रयोग गर्नुहोस्। ब्याट्री गम्भीर समस्या थियो। एक "ब्याट्री लाइफ" अनुप्रयोग परामर्श, नयाँ ब्याट्री, त्यसैले कुरा गर्न को लागी, पहिले नै ०.6% बेकार थियो। म यसलाई आईफोन for को लागि व्यापार गर्न सक्षम भयो र अहिलेै गरें। भिन्नता? हो, र असामान्य। मेरो नयाँ आईफोन ममा बचत मोडमा प्रवेश नगरीकन सबै दिन रहन्छ। मलाई लाग्छ कि एप्पल र सामसु .ले पनि उनीहरूको उपकरणको ब्याट्रीमा गल्ती गरेको छ, यस अवस्थामा आईफोन s एस।
नमस्कार, पोखरीको यो छेउमा (चिली) आईफोन s एसको साथ पनि यस्तै हुन्छ, मैले सबै चीज प्रयास गरेको छु, यसलाई पूर्ण रूपमा मेटाउँछु, ब्याकअप प्रयोग गर्छु आदि। ब्याट्री एक्लो हुन्छ ... १ वटा मात्र व्हाट्सएप लेख्दै तपाईंले कम्तिमा १% हराउनुहुन्छ ... ब्याट्री वास्तवमै खराब छ ... र यो पनि अनौठो कार्य गर्दछ, त्यहाँ दिनहरू हुन्छन् जब म रात ११ सम्म सम्म आउँछु र म61% र अरुहरुसँग जब म pm% छ 1 बजे। फोन ठीक छ, तर ब्याट्री खराब छ। राम्रो, अभिवादन
नमस्ते, समान कुरा मलाई भयो जब मैले १०.२ मा अपडेट गरेको छु र म अझै १०.२.१ लाई प्रतिरोध गर्दछु, ब्याट्री छिटो तल जान्छ। मैले अवलोकन गरें कि यस भन्दा पहिले यसले लगभग केहि पनि खर्च गर्दैन र अब पनि व्यर्थमा यसले खर्च गर्दछ (%%% देखि २ in घण्टामा% 10.2%, प्रणाली पूर्ण रूपमा सफा र समाप्त अपडेट)।
टार्टारगुइलाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईफोन s एस छ र मसँग उही समस्या छ, हामीले पहिले नै सब प्रयास गरिसकेका छौं, ब्याट्री एक एप्पल स्टोरमा परिवर्तन भएको थियो र यो उही रहन्छ, यो or वा hours घण्टा अधिकतम र तातो रहन्छ, के यस समस्याको समाधान भेटियो?
ठीक छ, केहि महिना पछि म फेरि एक सामसु ch चिप संग एक आईफोन ss प्राप्त गर्दछ र यसले ब्याट्री समस्या गर्न जारी राख्छ (यो थोरै र अधिक गरम रहन्छ) १ महिना अघि मैले TMSC चिपको साथ छोडिदियो र यसले राम्रोसँग काम गर्यो।
बिली जो भन्यो
आईफोन s एस प्लस आईओएस १०.२ अपडेट नभएसम्म मेरो लागि उपयुक्त थियो, जुन विन्दुमा ब्याट्री समस्या सुरु भयो। म एप्पल स्टोरमा गएँ र उनीहरूले खपत जाँच गरे तर ब्याट्री उत्तम थियो। उनीहरूले मलाई कारण दिन सकेन किन अत्यधिक खपत र अति तातो। अब, सबैमा सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा यो हो कि कहिलेकाँही र कुनै कारण निर्धारण गर्न सक्षम बिना, यो केहि दिनको लागि अपडेटको रूपमा पूर्ण रूपमा कार्य गर्दछ।
बिली जो लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार राम्रो, म तपाईंलाई चिलीबाट लेख्दै छु। मसँग GB6जीबी s एस छ र ब्याट्री घिनलाग्दो छ, यो 64 ०% बाट drops० मिनेट भन्दा कममा 90 75% सम्म झर्छ। मैले अधिकतममा ब्राइटनेस राख्न र भिडियोहरू एकै साथ हेर्न वा रेकर्ड गर्न परीक्षण गरिसकें, र ब्याट्री एक घण्टा भन्दा बढि लामो समय सम्म चल्दैन। केही दिन अघि उनीहरूले म्याकस्टोरमा प्रतिस्थापन कार्यक्रमको लागि ब्याट्री परिवर्तन गरे। तर यो उस्तै उस्तै छ। लाजमर्दो कुरा।
मार्टिन सेन्ज भन्यो
यसको कुनै समाधान? वा म फेरि सामसु toमा जान्छु? पूर्ण निराशा।
मार्टिन सेन्जलाई जवाफ दिनुहोस्
म यहाँ वरिपरिको जस्ता नै हुँ ... € € ० आलुको साथमा यदि म सफारी प्रयोग गरिरहन्छु भने यो १ घण्टासम्म रहन्छ ...
सत्य यो हो, मलाई विश्वास छ कि यो अद्यावधिकहरूको कारणले गर्दा हो, प्रत्येक एक पछिल्लो भन्दा खराब छ र मेरो विचारमा तिनीहरू तपाईंको उपकरणमा प्रस्तुत गर्न अप्रचलित छन्। कुल, हामी कसरी यो हरेक वर्ष बदल्छौं, सही? म धेरै चिन्तित छु र सँधै सँधै प्रयोग गरिरहेको छु
Pablito लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई थाहा छ यदि यससँग स्यामसंग चिप वा रीटा क्यान्टोरा, le०० लेलो र गधा जस्तो छ।
Gino लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो ब्याट्री एक घण्टा लामो छैन वा पृष्ठभूमिमा अनुप्रयोगहरू राख्दैन
Rutys लाई जवाफ दिनुहोस्
एल्सा ग्लोरिया Pavese भन्यो
बनाउँछ6महिना
मेरो आईफोन s एस डिसेस्टरको ब्याट्री, यसले केहि पनि टिकाउँदैन, यो छिटो पतन हुन्छ, भयानक अनुभव, दुर्भाग्य ...
एल्सा ग्लोरिया पाभसेलाई जवाफ दिनुहोस्
त्यो ब्याट्री कति पुरानो हो?
वाचOSOS 3.2.२ बिटा १ अब उपलब्ध छन्, सिरिकिट र थिएटर मोडको साथ
ब्राउजर नछोडी IOS को लागि सफारीमा वेब पृष्ठहरू कसरी अनुवाद गर्ने